Pearl Harbor လေကြောင်းပြတိုက်သည် ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အိုင်ကွန်ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ယူအက်စ်အေ
တည်နေရာ: ပင်မစာမျက်နှာ » Post » နိုင်ငံ | တိုင်းဒေသကြီး » အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု » Pearl Harbor လေကြောင်းပြတိုက်သည် ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အိုင်ကွန်ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ပညာရေး • သတင်း • သတင်းအမြန် • အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
Pearl Harbor လေကြောင်းပြတိုက်သည် ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အိုင်ကွန်ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
မေလ 25, 2022
Ford Island Control Tower သည် 30 ခုနှစ် မေလ 2022 ရက်နေ့တွင် အောက်မေ့ဖွယ်နေ့ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ အဆင့်မြင့် လက်မှတ်များကို ယခု ရောင်းချပေးနေပါပြီ။
ပုလဲဆိပ်ကမ်းလေကြောင်းပြတိုက် ဆယ်စုနှစ်များစွာ ပိတ်ထားပြီးနောက် သမိုင်းဝင် Ford Island Control Tower ၏ တံခါးများကို ဖွင့်ရန် ပြင်ဆင်နေပါသည်။
ခရီးစဉ်အသစ်၊ Top of the Tower Tour သည် သမိုင်းဝင် လည်ပတ်မှုအဆောက်အဦ၊ မီးဖိုချောင်ပြပွဲသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့် ထိန်းချုပ်တာဝါ၏ အပေါ်ဘက်သို့ ဓာတ်လှေကားစီးခြင်း ပါ၀င်သည့် ဧည့်လမ်းညွှန် - ခရီးစဉ်၏ အထွတ်အထိပ်သို့ 360 ဒီဂရီ မြင်ကွင်းများ အမြင့် 168 ပေမှ Pearl Harbor လေကြောင်းစစ်မြေပြင်။ တက္ကစီအပေါ်ပိုင်းရှိ သမိုင်းဝင်ဗီဒီယိုများနှင့် ဓာတ်ပုံများသည် တိုက်ခိုက်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် နောက်ဆက်တွဲများကိုပြသပြီး “နာမကျန်းဖြစ်မည့်နေ့” ကို နားလည်မှုအသစ်တစ်ခုပေးသည်။
စစ်ဆင်ရေးအဆောက်အအုံ၏အောက်ခြေတွင် U-Haul® မှ သုတေသနပြုလုပ်ပြီး တီထွင်ဖန်တီးထားသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးသားရတနာပြပွဲကို ထိန်းသိမ်းထားကာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းနှင့် တာဝါတိုင်များ၏သမိုင်းကြောင်းကို လေ့လာစူးစမ်းသည့်အနေဖြင့် ကျောက်ချရပ်နားထားသည်။ ပြပွဲတွင် U-Haul တည်ထောင်သူ LS Ted နှင့် Anna Mary Cary Schoen တို့၏ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဇာတ်လမ်းကို မျှဝေထားသည်။ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဉာဏ်ပညာ၏ မိသားစုဇာတ်လမ်း.
"Ford Island Control Tower သည် ခံနိုင်ရည်အားနှင့် ငြိမ်သက်ခြင်း၏ သင်္ကေတအဖြစ် ရပ်တည်နေပြီး ဤသန့်ရှင်းသော မြေပြင်ပေါ်တွင် ရပ်စောင့်နေသည်" ဟု Pearl Harbor လေကြောင်းပြတိုက်၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Elissa Lines က ပြောကြားခဲ့သည်။ "ကမ္ဘာ့လေကြောင်းရှုထောင့်ကနေ ပုလဲဆိပ်ကမ်းကို သက်သေပြရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ။"
Ford Island Control Tower သည် 30 ခုနှစ် မေလ 2022 ရက်နေ့တွင် အောက်မေ့ဖွယ်နေ့ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို 2012 ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး ယနေ့အထိ အမေရိကန်ဒေါ်လာ7သန်းကျော် ကုန်ကျခဲ့သည်။ ၁၀ နှစ်တာ ကြိုးပမ်းမှုတွင် ပါဝင်သည်- သမိုင်းဝင် ပြတင်းပေါက်များနှင့် နံရံများ ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း၊ အဆောက်အဦ တည်ငြိမ်စေရန် တာဝါတိုင်ရှိ သံမဏိ ၅၃ တန်ကို အစားထိုးခြင်း၊ မျက်နှာကျက်၊ ကြမ်းခင်းများ၊ လျှပ်စစ်ပိုက်လိုင်းများ၊ အလင်းရောင်များ၊ သန့်စင်ခန်းများနှင့် ရုံးခန်းနေရာတို့ကို ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း။ လေအေးပေးစက်လည်း ထည့်ထားပါတယ်။
ပြီးမြောက်မည့် နောက်ဆုံးအဆင့်၊ သမိုင်းဝင် ဓာတ်လှေကားအား ပြန်လည်မွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်းသည် မြေညီထပ်မှ အပေါ်ထပ်မှ ထိန်းချုပ်တက္ကစီသို့ ဝင်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ U-Haul ၏ Schoen မိသားစုမှ ရန်ပုံငွေနှင့် Otis ဓာတ်လှေကားကုမ္ပဏီမှ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုဖြင့်၊ ဓာတ်လှေကားဓာတ်လှေကားစနစ်ကို 1940 ခုနှစ်များခေတ်က စက်ပစ္စည်းများ၏ သမိုင်းဝင်အစိတ်အပိုင်းများကို ထိန်းသိမ်းကာ ဘေးကင်းသောလည်ပတ်မှုများကို သေချာစေရန်အတွက် လိုအပ်သလို ပြုပြင်မွမ်းမံပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ ဓာတ်လှေကားသည် ဧည့်သည်များအား အပေါ်ထပ် တက္ကစီ ပြပွဲနှင့် ရှုခင်းကြည့်ကုန်းပတ်သို့ 15 ထပ်တက်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်သည်။ ကျန်ရှိနေသော အပြင်ပိုင်းပြတင်းပေါက်များ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး နောက်ဆုံးပရောဂျက်ကို ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားသည်။
“မျှော်စင်ကနေ၊ မိုးခြိမ်းသံတွေ၊ ဗုံးတွေနဲ့ ကျည်ဆန်တွေ ကျလာတဲ့ မိုးခြိမ်းသံတွေကို မြင်ယောင်ကြည့်ဖို့ လွယ်ပါတယ်” ဟု ပြပွဲများ၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် ကုသရေးဝန်ဆောင်မှုများဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာ Rod Bengston က ဆိုသည်။ “ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ လာရောက်လည်ပတ်သူတွေဟာ သမိုင်းဝင်မြင်ကွင်းကနေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ အေးချမ်းမှုကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။”
အပေါ်ပိုင်းထိန်းချုပ်တက္ကစီရှိ ပြပွဲကို ဒီဇိုင်နာ Bengston ၏ အဆိုအရ အောက်ပါနေရာများကို မျှော်စင်မှ မြင်တွေ့နိုင်သည် ။
အမေရိကန်ရေတပ် စစ်သင်္ဘောရှစ်စင်းရှိရာ Battleship Row (USS Arizona, USS Oklahoma, USS West Virginia, USS California, USS Nevada , USS Tennessee, USS Marylandနှင့် USS Pennsylvania ၎) ဗုံးကျဲပျက်စီးခဲ့ပြီး၊
Hickam၊ Wheeler၊ Bellows၊ Ewa၊ Schofield နှင့် Kaneohe ရှိ စစ်အခြေစိုက်စခန်းများနှင့် လေယာဉ်ကွင်းများ၊
ဂျပန်ဧကရာဇ် ရေတပ်လေတပ်က တိုက်ခိုက်မှုကို စတင်ခဲ့တဲ့ Ewa Plains၊
USS Nevada ကမ်းခြေမှာ ရှိတဲ့ ဆေးရုံပွိုင့်၊
Ford ကျွန်းပြေးလမ်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သင်္ဘောကျင်းများနှင့် သမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံများ
Pearl Harbor National Memorial တွင် USS ပါရှိသည်။ Arizona အမှတ်တရအဖြစ် Battleship Missouriအောက်မေ့ဖွယ် နှင့် ပစိဖိတ် ရေငုပ်သင်္ဘော ပြတိုက်။
Ford Island Control Tower ၏ ဆယ်စုနှစ်များစွာ အဆင့်ဆင့် ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအတွက် ရန်ပုံငွေကို Hawaii ပြည်နယ်၊ Emil Buehler Perpetual Trust၊ Freeman Foundation၊ သမိုင်းဝင် Hawaii ဖောင်ဒေးရှင်း၊ James Gorman Family Foundation၊ OFS Brands၊ Dave Lau တို့မှ ရက်ရောသော လှူဒါန်းမှုများဖြင့် ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ပါသည်။ နှင့် Sharon Elske၊ Alexander “Sandy” Gaston၊ Robert A. နှင့် Susan C. Wilson Foundation၊ RK Mellon Family Foundation၊ CDR နှင့် Mrs. Edward P. Keough၊ Larry and Suzanne Turley နှင့် အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးဌာန နှင့် များစွာသော အခြားပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ကော်ပိုရေးရှင်းများ။
Pearl Harbor လေကြောင်းပြတိုက်သည် အမေရိကန်၏ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်လေယာဉ်စစ်မြေပြင်တွင် တည်ရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံ၏ နှစ် 250 နီးပါးသမိုင်းတွင် အမေရိက၏မြေပြင်ပေါ်တွင် ပြည်ပရန်သူ၏ တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည့် နေရာအနည်းငယ်ထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မြေပေါ်ရှိ ဓါးစာခံအမှတ်အသားများမှသည် အမေရိကန်သမိုင်းတွင် အကျော်ကြားဆုံး စစ်သင်္ဘော၏ မယုံနိုင်လောက်အောင် မြင်ကွင်းများအထိ၊ မျှော်စင်ပေါ်မှ မြင်ကွင်းများကို လက်လွတ်မခံသင့်ပါ။
၏ နောက်ထပ်အကြောင်းအရာများ လကွောငျးသယျပို့ဆောငျရေး | မိသားစု | အိုက်စလန် | အဆောက်အဦး | Hawaii
ဟာဝိုင်အီသည် ဆိုရှယ်မီဒီယာကို အစွဲအလမ်းအနည်းဆုံးနိုင်ငံစာရင်းတွင် ထိပ်ဆုံးမှ ရပ်တည်နေသည်။ Hawaii|
Lyft ၏ Uber ဘေးကင်းသည် သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ရှိသည်။ Hawaii|
Airbus သည် ဂျာမန်လေတပ်အသွင်ပြောင်းခြင်းကို ရေရှည်တည်တံ့သော လေကြောင်းလောင်စာဆီအဖြစ် ပံ့ပိုးပေးသည်။ လကွောငျးသယျပို့ဆောငျရေး|
နယ်သာလန်သည် Environmental Protection အတွက် စိန့် Eustatius တွင် ဧရာမခြေလှမ်းကို တက်လှမ်းခဲ့သည်။ အိုက်စလန်|
Barbados ကိုလည်ပတ်ခြင်း- မင်းအဲဒီကိုရောက်တာနဲ့ ဘယ်လိုသွားမလဲ။ အိုက်စလန်|
လကွောငျးသယျပို့ဆောငျရေး အဆောက်အဦး မိသားစု Hawaii အိုက်စလန်
မိုင်ယာမီကမ်းခြေ၏ ဗိသုကာလက်ရာ အထင်ကရနေရာများ။ Art Deco မှ Mediterranean Revival အထိ
နွေရာသီအားလပ်ရက်များ၊ အားလပ်ရက်လှုပ်ရှားမှုများနှင့် အန္တရာယ်ရှိသော အရက်သောက်ခြင်း။
မထွက်ခွာမီ စမ်းသပ်ခြင်းအား ရုပ်သိမ်းခြင်းအတွက် ပံ့ပိုးမှု Builds...
Skål International Bangkok မှ ကူညီလှူဒါန်းမှု ပြုလုပ်...
Zanzibar သည် မေလတွင် Grand Africa ရက်သတ္တပတ်ပွဲများကျင်းပရန်စီစဉ်ထားသည်။
တောင်အာဖရိကမှာ COVID-19 ခရီးသွားလာမှု ကန့်သတ်ချက်တွေကို ရုပ်သိမ်းဖို့...
ဓနသဟာယတွင် ပါဝင်ရန် ဝန်ကြီး Bartlett...
Blossom Hotel Houston သည် TripAdvisor ၏ အကျော်ကြားဆုံး အသစ်...
လေကြောင်းအတွက် ရေရှည်တည်တံ့သော အနာဂတ်ကို မည်ကဲ့သို့ လုံခြုံစေမည်နည်း။
Frankfurt ရှိ IMEX သည် ပွင့်လန်းစွာဖြင့် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည်။
Ontario အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ရှိ Premium Lounges အသစ်များ...
Marilyn Monroe ရဲ့ Warhol ရဲ့ ပုံတူ...
Martinique ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအဆုံးတွင် အလင်းရောင်ကိုမြင်ရသည်...
Swoop တွင် Saint John-Toronto လေယာဉ်အသစ်
UNWTO Jeddah တွင် အမှုဆောင်ကောင်စီအစည်းအဝေးကျင်းပနေ...
Oceania Cruises New 2024 Voyages စုစည်းမှု
Rosewood Hotels & Resorts သည် ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်၊ Naples သို့ ရောက်လာသည်။
အကျင့်စာရိတ္တကျန်းမာရေးစျေးကွက်တွင် ရောင်းအားကျဆင်းနေမှုကို သက်သေခံရန်...
Playa del ရှိ American Tourist မှ iPhone အသစ်...
ပံ့ပိုးကူညီမှုအတွက် အသိအမှတ်ပြု VINCI လေဆိပ်များ...
ယူနိုက်တက်သည် နယူးယော့ခ်-နိုက်စ်လေကြောင်းခရီးစဉ်များကို တိုးမြှင့်လိုက်ကာ မိုနာကိုကို တိုးမြှင့်...
မွတ်စလင်မင်္ဂလာပွဲနှင့် ကွာရှင်းမှုအတွက် စာချုပ်အသစ်
WestJet ခရီးသည်များ မရောက်မီ ပျံသန်းရန် ရှင်းလင်းနေပြီ...
New Istanbul မှ Budapest သို့ AnadoluJet လေယာဉ်
ဟိုတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ဆွဲဆောင်ရန် အရေးကြီးသောအချက်များ
ပျံသန်းရန် နည်းလမ်းသစ်- အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်းမှ လေယာဉ်များကို အစားထိုး...
Qatar Airways Group သည် ၎င်း၏ အမြတ်အစွန်းအများဆုံးရ...
Lufthansa နှင့် Eurowings Discover တို့သည် အထူးလေယာဉ်များကို ကမ်းလှမ်းသည်...